Ebe nkiri na ihe ndị dị na India | Akụkọ Njem
Ebe nkiri na ihe ndị dị na India
Maria José Roldan | | India, Oge ntụrụndụ, Asia njem
Ọ bụrụ n ’ịchọrọ ịga India mgbe ahụ ị nwere ike ị na-eme atụmatụ njem gị ogologo oge, ọ bụ ihe nkịtị. Travelga India ọ na-ewe ogologo oge iji nwee ọ enjoyụ n'ihe niile ọ nwere inye, njem naanị ụbọchị ole na ole ga-adị mkpụmkpụ. Ihe bụ ihe ọzọ, Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịga India ịkwesịrị ịma nke ọma ebe ịchọrọ ịnọ na mmefu ego i nwere. Na India enwere ọnụahịa dị iche iche, mana dabere na ọnụahịa ị nwekwara ike ịnwe nkasi obi ma ọ bụ obere, nke a ga-adabere na mmasị gị.
Na mgbakwunye na ịnwe ihe a niile mgbe ị na-aga India, ị ga-achọ ịma ihe kachasị amasị ha na omume ha ka mma ịhazi njem gị. Taa, achọrọ m ịgwa gị gbasara ụfọdụ ebe nlegharị anya na ihe omume dị na India ka ị nwee ike ịhọrọ njem gị nke ọma.
Na India ị nwere ike inwe ọtụtụ ebe nkiri na ihe omume ị ga-eme, na mgbakwunye na ịga ileta ebe dị egwu iji nwee ezumike ma ọ bụ njem dị mma.
1 Obodo Delhi
2 Nleta nke ebe obibi mara mma nke Taj Mahal
3 Ogige ntụrụndụ nke India
4 Nnukwu Ọzara nke India
5 Ebe dị nsọ
6 Ihe omume
E kewara New Delhi na ụzọ abụọ, Old Delhi na Modern ma ọ bụ New Delhi. Nke ikpeazu bu obodo ohuru nke nwere otutu ihe ichoro na nkpachi nke oge a nke ga ewepu ume gi. Old Delhi nwere okporo ámá ndị dị warara na ụlọ arụsị dị egwu, obi abụọ adịghị ya na enwere ọtụtụ ndị ọbịa na-ahọrọ ịla n'iyi na Dehli oge ochie. Gaghị enwe ike ịhapụ Red Fort na Jama Masjid, Mosquelọ alakụba kasị ukwuu nke India, ị gaghị echefu ọmarịcha arlọ Mbube Ọcha nke India.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịhụ ihe osise dị ịtụnanya Gaghị enwe ike ichefu ọbịbịa nke Golden Triangle. Triangle Golden ahụ dị n'ahịrị agbata n'etiti Delhi, Agra na Jaipur. . Na akụkụ ndịda nke triangle bụ Agra, nke a maara maka Taj Mahal. N’akụkụ ndịda ọdịda anyanwụ bụ Jaipur na Rajasthan, ụlọ nke Amber Palace na Obí nke Winds.
Nleta nke ebe obibi mara mma nke Taj Mahal
Taj Mahaj dị na Agra mara ụwa dum ma bụrụ nnukwu nnukwu marble mausoleum na e wuru ya n’agbata 1632 na 1653 site n'aka Mogo Emperor Shan Jahan na ebe nchekwa nke nwunye ya kachasị amasị. A na-akpọ Taj Mahal: "akwa na agba nke mgbe ebighi ebi" na ọ bụ otu n'ime ihe ndị kachasị mma nke ụlọ Mughal na ọ bụ otu n'ime ihe ncheta kachasị mkpa na India.
Ọzọkwa, dome ọcha nke Taj Mahal ọ bụ marble na m gụnyere ụlọ ndị ọzọ mara mma, mmiri mmiri, nnukwu ubi ịchọ mma nwere osisi, okooko osisi na ahịhịa mara mma. Ọ bụ ịma mma na ọ bụrụ na ị hụ ya na onye mbụ ọ gaghị enwe ike ịhapụ gị enweghị mmasị.
Ogige ntụrụndụ nke India
India enweghị ihe na-erughị ogige ntụrụndụ mba 70 ma akụkụ ya nwekwara ọdụdụ 24 na ebe nsọ ọhịa 400 dị na mba ahụ.. Naanị ịnwe oge iji gaa leta ha niile, ị ga-achọ ọtụtụ ọnwa ezumike ... yabụ otu echiche bụ na ị na-achọ ihe ọmụma na nke ọ bụla n'ime ha ma n'ụzọ ahụ ị nwere ike ịhọrọ nke kachasị ịchọrọ ịga ma ọ bụ nke ahụ bụ ọ kacha nso n’ebe ị ga-anọ.
Agụ Indian na Asia Elephant dị na mpaghara ahụ dum, mana ọ bụrụ na ịchọrọ ịmara ihe ndozi kachasị ama ama ma chọọ ịga leta ya ka ị nwee ike ịhụ ihe niile ọ nwere n'anya, hụkwala ya Rajasthan's Bharatpur National Park na Bengal Sundarban National Park.
Nnukwu Ọzara nke India
N’ebe ugwu ọwụwa anyanwụ India, ị ga-ahụ Great Desert a makwaara dị ka Thar. Ọzara a na-ekpuchi ebe dị kilomita 804 n'ogologo na kilomita 402 n'obosara. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe ọ bụla! Enwere obodo dị n'ọzara a dịka obodo ọzara nke Rajhasthan ma ọ bụrụ na ị gaa na ha, ị ga-ahụ na ha na-egbu maramara. Obodo kachasị ama ama ịga leta bụ Jaisalmer n'ihi Ememe Ọzara ya nke a na-eme n'ọnwa Jenụwarị na Febụwarị ma ọ bụ obodo Pushkar ebe a na-eme Ihe ngosi Kamel na Nọvemba.
Na mgbakwunye na nke a niile, ị nwekwara ike ịchọta ebe ewusiri ike, obí eze na ụlọ arụsị dị oke mkpa na akụkọ ihe owuwu ụlọ.. Mana ọ bụrụ na ịchọrọ ileta Rajhasthan ị gaghị echefu Udaipur, Ebe magburu onwe ya ị ga-eso gị gaa ebe ọ bụ na ọ bụ ihe ihunanya. Cheedị ma ọ bụrụ na ọ bụ ihe ihunanya na enwere ndị na-akpọ ebe a "Venice nke East". Obodo a wuru gburugburu Lake Pichola na Lake Palace bụ ebe ị nwere ike ịnọ iji nwee ike ịtachi obi na ndụ n'ọzara (ekele maka ọdọ mmiri).
Ebe dị nsọ
Ikekwe ị maara na India bụ otu n'ime ebe okpukpe kachasị na ọ bụ ya mere na ị gaghị enwe ike ịhapụ ụfọdụ n'ime ebe nsọ ya, n'agbanyeghị na e nwere ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke okpukpe dị iche iche na-ebikọ ọnụ. Ndị mmadụ na-asọpụrụ nkwenkwe nke ibe ha, bụrụ nnukwu ihe atụ nke ịnagide okpukpe niile.
Okpukpe kachasị na India bụ Hindu na a pụkwara ịsị na ọ bụ otu n'ime okpukpe ndị kacha ochie n'ụwa. Sistemụ ọgbụgba ndụ Hindu na-arụ ọrụ dị mkpa na ndụ na ọha mmadụ nke ndị India. Otu n'ime ebe kachasị mkpa ịgaghị atụfu ohere ị ga-aga bụ Varanasi, nke bụ ụlọ okpukperechi nke ụwa Hindu ma nwee ụlọ na-erughị puku na puku ndị njem ala kwa afọ.
Kwesịrị ịga leta Puri n'ụsọ mmiri nke Bay nke Bengal nke bụ otu n'ime ebe ndị njem njem kachasị ukwuu na India ma mara nke ọma maka Jlọ Nsọ Jagannat.
Na mgbakwunye, na India niile enwere ebe dịịrị okpukpe ndị ọzọ dị ka Buddha, Sikh, na Iso Christianityzọ Kraịst.
Mana ọ bụrụ na mgbakwunye na ịmara ụlọ, ndị ya, ụlọ arụsị na ogologo wdg, ị kwesịrị ịmara na n'India enwere ebe ejikọtara egwuregwu egwuregwu ka ị nwee ike ezumike. juputara na oru na adrenaline.
Nwere ike ịchọta ugwu ịgba ọsọ n'oge oyi, osimiri na iyi mmiri iji mee egwuregwu mmiri dị egwu, ụsọ mmiri, oke ọhịa ... Na India ị nwere ike ime oke, ịgba ọsọ, njem njem, ịgba ọsọ, mmiri na egwuregwu egwu, golf ... You ga - ahọrọ ebe na ihe ị chọrọ ime.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Asia njem » Ebe nkiri na ihe ndị dị na India
Ogige ntụrụndụ ise dị ka onyinye Oriri Nsọ